San Htun's Diary: Living with lupus - 2
စန်းထွန်းခရီးတွေထွက်ပြီးခုချိန်ထိ ပို့ စ်တွေတက်မလာလို့ နေမကောင်းဖြစ်နေသလားလို့ လေ။
ကုိုယ်ခံနုိုင်ရည်ရှိသလောက်သတိထားနေပါစန်းထွန်းရေ။ မပေနဲ့ နော်။
ဒုို့ လည်းစန်းထွန်းအရွယ်တုန်းက ခေါင်းမာတယ်။
ဖြစ်တော့သူများတွေစိတ်မကောင်းအလုပ်ပုို ခံရတော့ကုိုယ်။ စန်းထွန်းကတစ်ယောက်တည်း မပေနဲ့ နော်။
အရည်ပြားမှာ မဲသွားတာတွေက အနာကြောင့်ဆုို ဖြည်းဖြည်းတော့ပျောက်သွားမှာပါ။
မမအုိုင်အုိုရာ ရေခဲတောင်တက်တုန်းက ရေခဲတောင်ဖြုတ်တွေအကုိုက်ခံရတာ
ဒီညကစလုို့ ဘုရားရှစ်ခုိုးတဲ့အခါ စန်းထွန်းအတွက်သီးသန့် ထဲ့ဆုတောင်းပေးမယ်နော်။
Sis, the first pic looks like shingles to me. I had it too n took antivirus foraweek.
စန်းထွန်းပြောတဲ့ လူးပက်စ် ဆိုတာတော့
နဲနဲနံ့တယ်.. ၆လလောက်မှ အမာရွှတ်တွေပျောက်သွားတော့တာ..
Really sad to see that